Alex Oxlade-Chamberlain oo Tijaabo Caafimaad u Maraya kooxda Chelsea | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Alex Oxlade-Chamberlain oo Tijaabo Caafimaad u Maraya kooxda Chelsea
(29-8-2017) Laacibka khadka dhexe kooxda Arsenal uga ciyaara ee Alex Oxlade-Chamberlain ayay hal talaabo oo kali ahi uga hadhsan tahay ku biiritaankiisa kooxda difaacanaysa horyaalnimada Premier League ee Chelsea.
24 jir, Oxlade-Chamberlain, oo uu qandaraaska uu naadiga kula joogaa ka dhacayo ama kaga eg yahay xagaaga sanadka dambe ayaa diiday inuu heshiiska u cusboonaysiiyo kooxda Emirates Stadium.
Xiddiga xulka England ayaa lagu bilaabi jiray ciyaar kasta oo ay Gunners leeyihiin intii xili ciyaareedkani bilaabmay, oo ay ku jirto ciyaartii 4-0 ka Liverpool ku ciqaabtay taas oo uu bedel kaga baxay.
Chelsea ayaan ka gaabsatay inay warkan shaaca ka qaado, waxaase warbaahintu ogaatay inay labada naadi ee London ka wada dhisani isku af-garteen qiimaha ciyaaryahanka.
Liverpool ayaa sidoo kale xoog u danaynaysay helida laacibkan, laakiin ciyaaryahankan hore ee naadiga Southampton wuxuu ka doorbiday inuu u wareego Stamford Bridge.
Oxlade-Chamberlain wuxuu noqonayaa ciyaaryahankii shanaad ee Chelsea xagaagan suuqa ka iibsato, waxaanu daba socdaa weeraryahan Alvaro Morata, goolwade Willy Caballero, difaacyahan Antonio Rudiger iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tiemoue Bakayoko.